मत किन्न झोला–झोलामा पैसा र साडी बाँड्दै गठवन्धनका नेता र कार्यकर्ता - PUBLICAAWAJ
मत किन्न झोला–झोलामा पैसा र साडी बाँड्दै गठवन्धनका नेता र कार्यकर्ता
प्रकाशित : बुधबार, बैशाख २८, २०७९१२:५८ पब्लिक आवाज / संवाददाता , अम्बिका
चितवनको भरतपुर महागनरपालिकामा गठवन्धनका नेतारकार्यकर्ता पैसा बाँडेको आरो’प लागेको छ। कांग्रेसबाट बागी वनेर मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले यस्तो आ’रोप लगाएका हुन् ।
भरतपुरको मालपोत चोकमा मंगलवार आयोजित कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले सत्ता गठबन्धनले मतदाता प्रभावित गर्न झोला–झोलामा पैसा र साडी बाँडेको बताए । उनले झोलाझोलामा पाँच हजार, दश हजार र साडी बाँडेको सूचना आफूलाई आएको बताए ।
पौडेले मतदातालाई पैसा बाँड्ने कामको नेतृत्व कांग्रेसले गरिहेको आ’रोप पनि लगाए । उनले चितवन जिल्ला सभापति राजेश्वर खनालप्रति आक्रो’श पोख्दै नेता कार्यकर्तालाई फोन गरेर माओवादीलाई भोट दिनु, नदिए का’रवाही गर्छु भनेर ध’म्की दिएको जिकिर गरे।
‘यो दुर्भा’ग्य हो, हामीले हुर्का’एको एउटा मान्छेले हामीलाई कारवाही गर्ने ? हामीलाई कारवा’ही गरेर कांग्रेस बच्छ ?’ उनले भने–‘प्रचण्डजीले कांग्रेसलाई बचाइदिनुहुन्छ ? म भन्दा ठूलो कांग्रेस राजेश्वर हो कि म ? राजेश्वरभन्दा ठूलो कांग्रेस कृष्णलाल सापकोटा हो कि को हो ?’
पुन भूकम्पको धक्का महसुस
काठमाडौंमा वालेन्द्रको अग्रता कायमै‚ स्थापितभन्दा झन्डै १८ सय मतले अगाडि